MM Flash News – Page 278 – Myanmar news In myanmar
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှ လူစိတ်ဝင်စားမှုများ / သတင်း
လေးစားထိုက်လို့ လေးစာမိပါတယ် ခင်ဗျာ. . တစ်ခါတရံ အဝေးကြီးကိုမကြည့်ပဲ အနီးလေးကို ကြည့်ပေးပါ
နေရာ – လောကနန္ဒာ ဘုရားဝင်းအနီး ထမင်းဆိုင် ကျွ န်တော်အလုပ်ကိစ္စပြီး လို့ တပ်ရင်းပြန် လာတော့ နေ့ခင်း ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ထမင်းစားမယ် ဆိုပြီး အနီးအနားက ဆိုင်တစ် ဆိုင်မှာ ၀င်စားဖြစ်တယ့် ထမင်းစားနေ တုန်း ထမင်းဆိုင်နဲ့မ လှမ်းမကမ်း မှာ မိန်းမကြီး တစ်ယောက် က ကလေးခပ် ငယ်ငယ်ကို …
မူးယစ်ဆေးရှူနေ တဲ့ ကလေး ငယ် ရုပ်သံဖိုင် (နိုငံခြားက မဟုတ် ဘူး နော်)
ဘယ်လို မိဘ တွေ များ လည်း ကွယ်…… ကလေး က စကားတောင် ပီပီ မပြောတက်သေးဘူး…….. နိုင်ငံအတွက် ရင်လေးစရာပါလား ကွယ်……. သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံတော် ကြီး ကို ကူညီကြပါ အုံး………. Crd Video Source From Internet (Unicode Version) မူးယဈဆေးရှူနတေဲ့ ကလေး …
မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဒေသ ကိုးခုတွင် လေပြင်းနှင့် မိုးကြီးမည့်အန္တရာယ်ရှိနေ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ဝီဖာ ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့အပါ အဝင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ကိုးခု၌ လေပြင်းများ တိုက် ခတ်နိုင် ပြီး မိုးကြီးမည့် အန္တရာယ်ရှိနေ သည်ဟု မိုးလေဝ သနှင့် ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတိပေးထုတ်ပြန် ထား သည်။ အဆိုပါမုန်တိုင်း သည် ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ် အဖြစ် လာအိုနိုင်ငံပေါ် တွင် ဆက်လက်တည် …
တကယ်ကို လူတွေရဲ့အောက်တန်း ကျု မှုကိုဖော်ပြနေတဲ့ မန္တလေးမှာ ဖြစ် သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
မန္တလေးသူ/သား များ သတိထားစေ ဖို့ပါ ဒီနေ့ ညနေက မန္တလေးသူ/သား များ သတိထားစေ ဖို့ပါ ဒီနေ့ ညနေက မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင် ကားနဲ့ အပြင်သွား တုန်း ၈၂ လမ်း၊ လမ်း ၈၀ အရောက်မှာ သူ့ကား ကို နောက်က ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက အရှိန်မပါဘဲ ၀င်တိုက်လိုက် ပါတယ်၊ …
သာသနာ့ ကိုအသုံးချပြီး လ်ိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး
ယနေ့ မိမိတို့ ချမ်းအေးသာ စံမြို့နယ် သာသနာထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ မြို့နယ်ထဲ လှည့်လည်ကြစဉ် ရတနာ ပုံဈေးရှေ့ နားနေခုံပေါ်မှာ လဲလျောင်း အိပ်စက်နေတဲ့ သီလရှင်ဝတ် မိန်းကလေး တစ်ယောက် တွေ့ရှိကြလို့ ခေါ်ေ ဆာင်ပြီး စစ်ဆေးဖြစ် ကြပါတယ်။ သီလရှင်ဝတ်မှ မိန်းကလေးမှ- မြို့ဟောင်း ဘူတာဘေးရှိ ဓမ္မာပေါ်မှာ အဒေါ်ဖြစ်သူ သီလရှင်နှင့် အတူနေကြေ ကြာင်း …
Previous 1 … 277 278 279 … 370 Next